दृढ आत्मविश्वासले कसरी सफल बनाउन मद्दत गर्दछ ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
हामीले उहि पुरानाे खरायाे र कछुवाकाे दाैड भन्ने कथालाइ एक जीवन उपयागी कथाकाे रूपमा लिएर अाएका छाै । याे भिडियाेले तपाइमा अात्मविश्वास थप्ने काम गर्दछ । जीवनमा कहिल्यै पनि हार मान्नु हुदैन किनकि माैका सबैले पाउछन र त्याे माैकाकाे सहि सदुपयाेग गरियाे भने जीवनमा कहिल्यै पनि असफल भइदैन । अाज हामीले यसैबारे याे भिडियाे तयार पारेका छाै ।
हामीले याे भिडियाेमा प्रेरणादायी, जीवन उपयागी, जीन्दगीका सत्य वचनहरूलाइ एकमुष्ट रूपमा लिएर अाएका छाै । हामी तपाइहरूलाइ यस्तै विभिन्न सकारात्मक साेच भएका भिडियाेहरू प्रदान गरिरहने छाै । हामीलाइ साथ र माया दिइरहनुहाेस र हाम्राे च्यानललाइ पनि सब्स्क्राइब गर्नुहाेस ।
Don't Miss it सावधान ! यस्ता छन् आँखा पहेलो हुने कारणहरु, जान्नुहाेस्
Up Next निन्द्रामा हुने सबै कठिनाइ भगाउने केहि घरेलु उपायहरू
इज्जत कमाउन सिक्नुहोस, पैसाले त मात्र तपाईको भौतिक सुख मात्र पुरा गर्दछ
पानी पिउनु स्वास्थ्यकाे लागी राम्राे हाे तर आवश्यक भन्दा धेरै पानी पिउदा यस्ताे असर पर्छ । एकदिनमा स्वस्थ मानिसले कुन बेला, कसरी र कति पानी पिउनु पर्दछ ? जान्नुहाेस्